आजदेखि लकडाउन अन्त्य : के-के गर्न पाइन्छ ? के-के पाइँदैन ? – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आजदेखि लकडाउन अन्त्य : के-के गर्न पाइन्छ ? के-के पाइँदैन ?
मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ५ गतेको निर्णयअनुसार मंगलबार रातिदेखि लकडाउन अन्त्यको जानकारी दिनुभयाे । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउनु हुँदै प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, ‘लक-डाउनले मनोवैज्ञानिक त्रास पनि दियो र धेरै कुराको बहानाबाजी पनि गर्ने ठाउँ दियो । यो भन्दैमा स्वास्थ्य सुरक्षा पनि कायम राख्नुपर्छ । आज राति १२ बजेबाट लक-डाउनको विधिवत अन्त्य भएको छ ।’
लकडाउन हटेपनि कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्था यथावत नै रहेन सरकारले बताएको छ ।
के-के गर्न पाइन्छ ?
सरकारले सबै प्रकारका सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्दा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेलगायत जनस्वास्थ्यका सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी सेवा र कार्य सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ  । source : news24nepal